Fotoana: 2021-04-13 Hits: 15
Amin'ny maha-mpitarika amin'ny indostrian'ny fonosana antsika dia manana andraikitra isika hanena ny dian-tongotrantsika mba hanampy amin'ny ady amin'ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra hatrizay - ny fiovan'ny toetr'andro. Ny tanjon'ity paikadinay ity dia ny fampihenana ny famoahana ny ambongadiny 1 sy ny sehatra 2 CO2e hatramin'ny 20%.
Ekipa iray efa za-draharaha amin'ny famolavolana fananganana hitarika ny fironana amin'ny fandraharahana fonosana miaraka amina tranga famolavolana an'arivony.
Manerana ny asanay, ary mandritra ny faritry ny famatsian-tsika, dia manohy manao dingana lehibe amin'ny fampihenana ny dianay momba ny tontolo iainana isika. Ny paikadinay dia miorina amin'izany fandrosoana izany, mametraka fari-pahaizana avo lenta kokoa amin'ny fampihenana ny entona entona entintsika, ny fampihenana ny fako sy ny fampiasana rano, ary ny fampitaovana ireo fitaovantsika amin'ny fomba etika sy tompon'andraikitra azo atao.
Tamin'ny taona 2020, ny mpilatsaka an-tsitrapo HC Packaging dia nanolotra adiny iray heny ho an'ny tanjona eo an-toerana, avy amin'ny fanomezana sakafo ho an'ny loholona, ​​fanampiana ara-bola ho an'ny zazavavy mpianatra roa any Hunan, Sina, famonosana sy fanomezana boky ho an'ireo mpianatra sahirana, ary maro hafa.
Mifanohitra amin'ny ranomainty-petrole nentim-paharazana, ny ranomainty vita amin'ny soja dia heverina ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, mety hanome loko marimarina kokoa, ary manamora ny fanodinana taratasy.
Taloha: ProSweets Cologne 2019